Kugadzira 3-nzira yekufona inozivikanwawo nekugadzira foni yemusangano. Ndipo paunofona nevanhu vanopfuura mumwe chete. Mukufona kwemusangano, vese vanenge vafona vanogona kuitwa kuti vanzwe mumwe nemumwe. Izvo hazvina kuchena here? Pasina wekutaura izvo mumwe anoti kune mumwe, unogona kungorega mumwe muchiratidziro anzwa izvo mumwe ataura, uye kunyange izvozvo munguva chaiyo. Izvo zvigadziro zvekugadzira foni yemusangano zvinosiyana, zvinoenderana nekuti foni yako ndeye Android here kana iPhone. Ichi chidzidzo chinofukidza maitiro ekuita foni ye3-Way pa Android mu8 matanho ari nyore.
Maitiro Ekuita Mharidzo Yekufona pa Android mu8 Nhanho Diki
1. Fonera waonana naye.
2. Tinya Wedzera Kufonera sarudzo paunoda kuwedzera munhu anofona.
3. Fonera nhamba yemunhu wechipiri waunoda kufonera munzvimbo yekudayira-up.
4 .Nharembozha dzakaunzwa dzinounza iyo inowirirana kutaurirana.
5. Fonera wechipiri kubatana.
6. Kana iwe ukafona rwechipiri, yekutanga kufona ichave yakangoiswa pakubata.
7. Kuchaira kubva pane imwe call kuenda kune inotevera, tora Swap.
8. Kuti ubatanidze mafoni, baya Merge.
Uye ipapo unayo. Iye zvino unogona kugara pane imwechete nzvimbo asi uchikwanisa kutaura nevanhu vazhinji, izvo zviri nyore kwazvo kupfuura kuwana vanhu ivavo mukamuri imwechete yekutaura.
Kubatanidza Kufona pa Android
Nhamba yese yemafoni iwe yaunogona kusanganisa paAndrefoni yefoni zvinoenderana nezvimwe zvinhu, senge yemuenzaniso wefoni yako, wako wekutakura netiweki, uye chirongwa chetiweki. Pamhepo yekupedzisira-kuguma mafoni nemamodeli, vashandisi vanongobvumirwa kusanganisa mafoni maviri panguva imwe chete. Nekudaro, pane nyowani, akakwira-enda mafoni mafoni uye ma network, iwe unogona sanganisa kusvika kumashanu mafoni panguva imwe chete.
Yemahara 3-Way yekufona Mapurogiramu eApple
Kana iwe uchida mamwe maficha emusangano wekufona, pane zvimwe zvinobatsira uye zvemahara zvemahara pane Play Store izvo iwe zvaunogona kushandisa kweApple. Vanouya nezvakawanda zvakasiyana uye zvinonakidza maficha, akadai se 'kuvhara' musangano musangano 'chipinda' nevazhinji vanodana mukati mazvo; 'kugogodza' pane foni kana iwe uri mumusangano wekufona uyo waka "kiyiwa" uye zvimwe zvakawanda.
Mamwe emafungiro edu akasarudzika ndeanotevera:
Musangano Wodaidzira Kufona
Zvinhu zvekuchengeta mupfungwa Paunenge uchigadzira Kudaidza Musangano
Chekutanga pane zvese, yeuka kuti iwe unogona chete kutanga kuita kongiresi yekufona paAndroid kana iye wekutanga afona apinda foni yako.
Chepiri pane zvese, iye ari kuenda-anofona anozoiswa pakubata kana iwe uchiwedzera mutsva anodana.
Uye chechitatu pane zvese, kana usati watendera foni yako network inotakura masevhisi kuti ikwanise kuita akawanda kufona paSIM yako, unenge uchitadza kufona yemusangano zvisinei nefoni mhando yauri kushandisa.
Iyo 21 Yakanakisa Musangano Webhusaiti Dhizaini Iwe yaunoda Kopa
Maitiro Ekuita Kwemakona Ekufona Kubva kuFoni Yako